Kedu otu esi etinye ndị Malaysia ugbu a ileta Malaysia 2020?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Kedu otu esi etinye ndị Malaysia ugbu a ileta Malaysia 2020?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa Malaysia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Malaysia n'ezie Asia bụ otu n'ime mkpọsa na-aga nke ọma na njem njem njem njem ụwa na nke ụlọ ọrụ na-emepụta aha Australia. Ugbu a, a na-ekenye ndị Malaysia ọrụ maka mkpọsa ọhụụ Gaa Malaysia 2020.
Malaysia na-akwado ugbu a maka mkpọsa ọbịbịa Malaysia 2020 na a webatara Logo Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Malaysia nke 2020 wee kwupụta na ASEAN Tourism Forum. Akara ngosi ahụ siri ike na ọtụtụ kwuru na emezighi ya.
Onye minista na-ahụ maka njem na ọdịbendị n'oge ahụ bụ Mohamed Nazri Aziz agbachitere akara ngosi ahụ, na-ekwu na onye ọkaibe na-emeri emeri emebela akara ngosi ahụ n'efu.
Onye minista ọhụrụ nke njem nleta, nka na omenaala, Mohamaddin Ketapi chọrọ ka ndị Malaysia kpebie. Ọ na-emeghe imewe nke akara ngosi njem njem nke Malaysia 2020 na nke ndị Malaysia.
Malaysia kwupụtara asọmpi ụbọchị 14, nke ga-emepe na 11 Maachị ma mechie na 24 Machị 2019, ghere oghe nye ndị Malaysia niile gbara afọ 18 na karịa
Dabere na Mịnịsta njem, nka na omenaala ugbu a, Mohamaddin Ketapi, isiokwu nke akara ngosi ọhụrụ a ga-elekwasị anya na njem njegharị na-adigide na ndị na-eziga na ntinye ha kwesịrị igosipụta akụkụ ọdịbendị mpaghara na ebe nkiri njem nlegharị anya na mba ahụ.
“Mịnịstrị ahụ chọrọ ịgba ndị Malaysia ume ka ha sonye na mgbasa ozi VM2020 site na itinye echiche ha nke okike na imepụta akara ngosi. A ga - eji akara ngosi ahọpụtara wee rụọ ọrụ na nkwado mba na nke mba nke VM2020, ” o kwuru.
Ntinye aka na asọmpi ahụ bụ n'efu. Designdị njirimara ahụ kwesịrị ịnọchite anya ọdịbendị Malaysia na atụmatụ dị na New Malaysia yana ijikọ na logo Malaysia n'ezie Asia.
Ntinye ọ bụla ga-agụnye imewe akara ngosi na njirimara ihe eji eme ihe, nke niile ga-egosipụta ọtụtụ elele anya dị iche iche nke Malaysia.
Ọ bụ ezie na a ga-edozi atụmatụ nke imewe na Bahasa Melayu na Bekee, akara ngosi mkpọsa kwesịrị ịdị na Bekee maka ịdị mfe nke nkwalite mba ụwa.
Onye ọ bụla sonyere nwere oke OTU nrubeisi naanị. Ministri ahụ ga-ekwupụta ndepụta nke ndị mmeri na 12 Eprel
Onye mbu meriri gha enweta RM3,000 na asambodo, onye ozo gha enweta RM2,000 na asambodo ebe onye mmeri nke ato gha enweta RM1,000 na asambodo.
Ise ndị ọzọ mmeri ga-ọdịda RM250 dị ka a nkasi obi na-agbata n'ọsọ. Enwere ike ibudata ụdị asọmpi na Njem nleta Malaysia saịtị.